Wasiirada Arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Eritera oo soo gaaray magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaWasiirada Arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Eritera oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Wasiirada Arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Eritera oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Wasiirada Arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Eritera ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee casimada dalka Soomaaliya.
Labada wasiir ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye, danjiraha dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaludiin Mustafa Cumar iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka.
Wasiirada Arrimaha dibadda Itoobiya iyo Eritrea Dr. Workneh Gebeyehu iyo Cusmaan Saalax, ayaa hadda kulan kula jira madaxweynaha Soomaliya Maxamed Cabdullahi Farmajo oo xafiiskiisa ku qaabilay.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeyay iyadoo la xiray jidadka muhiimka ee Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda wax faah faahin ah kama bixin booqashadan dalka ay ku yimadeen wasiirada arrimaha dibadda dalalka Itoobiyo iyo Eritrea.
Booqashadan wasiirada arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa loo arka dadaal lagu sii xoojinayo, heshiisyadii nabadeed ee dhawaan dhex maray dalalka Geeska Afrika.
Harry Kane muxuu ka yiri ku biirista Kooxda Real Madrid
Foreign Ministers of Eritrea and Ethiopia arrive in Mogadishu